असली राष्ट्रवादको खोजी- विचार - कान्तिपुर समाचार
आधारभूत रुपमा त्यही व्यक्ति राष्ट्रवादी हो जसले राष्ट्र र समाजको सेवा गर्छ । नागरिकहरुलाई प्रगति गर्न सघाउँछ र न्याय दिलाउँछ ।
जेष्ठ ९, २०७७ गोविन्द केसी
तर, आधारभूत रूपमा त्यही व्यक्ति राष्ट्रवादी हो जसले राष्ट्र र समाजको सेवा गर्छ । त्यस्तो सेवा, जसले नागरिकको भलो गर्छ, उनीहरूलाई प्रगति गर्न सघाउँछ र न्याय दिलाउँछ । जब नागरिक स्वस्थ, शिक्षित, सक्षम र स्वाभिमानी हुन्छन्, तब मात्रै समाज र राष्ट्र बलियो बन्छ अनि राष्ट्रवाद सार्थक हुन्छ । जहाँ नागरिक निरीह रैतीको हैसियतमा हुन्छन्, त्यहाँ राष्ट्रियता बलियो हुनै सक्दैन र त्यहाँका शासक राष्ट्रवादी हुँदैनन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा राष्ट्रवादको विषय फेरि एकपल्ट चर्चामा आएको छ । देशको सीमा मिचिँदा आम नागरिकको भावनामा ठेस पुग्नु र मानिस आवेगमा आउनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसमाथि नेपालको उत्तरपश्चिम सिमानामा लिम्पियाधुरादेखि सीमा मिच्दै आएको भारतले अब लिपुलेक कब्जा गरेर त्यहाँ सडक खन्ने कामसमेत गरेको छ । देशका अन्य भागमा समेत सीमा मिचिनु सामान्य बनेको छ । त्यसबाहेक सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि भारतीय पक्षबाट बारम्बार गरिने ज्यादती अलग्गै छ ।
छिमेकीको यस्तो ज्यादती वर्षौंदेखि चलिरहँदा पनि नेपाल सरकारको रवैया के छ त ? चर्का राष्ट्रवादी कुरा गर्ने तर समस्या समाधान गर्न सिन्को नभाँच्ने । केही महिनाअगाडि भारतले नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालमा चर्को विरोध त भयो तर कूटनीतिक स्तरमा सरकारले उपलब्धिमूलक कुनै काम गर्न सकेन । अहिले भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरिसकेपछि बल्ल नेपाल सरकारले यो विषयमा केही बोलेको छ । योजस्तो लाजमर्दो कुरा अर्को के होला ! देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले आफ्नो भूमिमा अरूले सडक खनेको थाहै पाइनँ भन्नुजस्तो गैरजिम्मेवारीपन के हुन सक्छ ? संसारमा कुनै पनि देशको राजनीति यति मजाकको भरमा चल्दैन ।
हामी जतिसुकै आवेग र उत्तेजनामा आए पनि यथार्थ के हो भने, देशको कूटनीति आफ्नो मजबुती र ‘बार्गेनिङ पावर’ का भरमा मात्रै चल्छ । अर्को देशसित कुरा गर्न टेबलमा बस्दा आफूमुनिको धरातल कति बलियो छ, त्यति नै दह्रोसित हामी कुरा राख्न सक्छौं । त्यो धरातल बिर्सेर सतहमा मच्चाइने कुनै पनि कोकोहोलो अर्थपूर्ण हुँदैन ।
जबसम्म हामीले समाज र राष्ट्रका रूपमा हाम्रा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न अरूसित हात फैलाउनुपर्छ, जबसम्म हाम्रा नेताहरू पार्टी र गुटको झगडा मिलाउन छिमेकी देशका शासकको मुख ताक्ने अवस्थामा रहन्छन्, तबसम्म हामी खडा भएको धरातल मजबुत हुन सक्दैन । जबसम्म नेताहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनमार्फत देशलाई खोक्रो बनाएर यसको आँत सुकाउँछन्, तबसम्म जतिसुकै राष्ट्रवादी कुरा गरे पनि त्यसले अर्थ राख्दैन । नेताहरूले देशभित्रको असफलता र बरबादी छोप्न राष्ट्रवादलाई खोलका रूपमा प्रयोग गरे भने त्यसले झनै विसंगत अवस्था सिर्जना गर्छ ।
त्यसो भए, नेपालमा विकसित हुनुपर्ने राष्ट्रवाद कस्तो हो त ? पछिल्लो समय, खास गरी सत्ता वा त्यसवरिपरि हुनेहरूले कस्तो भान पार्न खोजेका छन् भने, कुनै एउटा देशको पाउबाट उठेर अर्को देशको पाउमा लम्पसार पर्नु नै राष्ट्रवाद हो । एकातिरको चरम परनिर्भरता अर्कातिर सार्नु भनेको हाम्रो कमजोरीको रूप बदल्नु मात्रै हो, हामी सबल बन्नु वा हाम्रो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्नु हैन । त्यसो गर्दा एउटा छिमेकीले हामीलाई अर्काको अतिक्रमणबाट बचाइहाल्छ वा उसको स्वार्थलाई दाउमा राखेर हाम्रो स्वार्थका लागि काम गर्छ भन्नु भ्रम मात्रै हो, जुन यसअगाडि नै बारम्बार पुष्टि भइसकेको छ । आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार चीन र भारतले कसरी क्रमशः तिब्बत र सिक्किमलाई निले र ‘तैं चुप, मै चुप’ को अवस्थामा पुगे भन्ने इतिहास हामीसामु छ ।
भारत र चीन मात्र नभई देशबाहिरको कुनै पनि शक्तिकेन्द्रप्रति ‘त्वं शरणम्’ हुँदै उसको भजन गाउनु राष्ट्रवाद हैन । हामीलाई त एउटाको काँधबाट अर्काको काँधमा हुत्तिने हैन, हाम्रै दुई खुट्टाका भरमा स्वतन्त्र रूपमा उभिने र आफ्नै बलबुतामा प्रगति गर्ने क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । यो काम सजिलो छैन तर देशका रूपमा नेपाललाई बलियो र स्वाभिमानी बनाउने हो भने हामीले यसो गर्नुको विकल्प छैन । सीमा मिचिएका बेला चुलिने अनि अरू बेला शिथिल हुने मौसमी राष्ट्रवादले हामीलाई सक्षम र स्वाभिमानी बन्न सघाउँदैन । राष्ट्रवाद हाम्रा लागि मौसमी नाराबाजीको विषय बन्नु हुँदैन, हामीले दिनदिनै बाँच्ने जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनुपर्छ ।
राष्ट्रवादमाथिको अहिलेको बहसमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छुटेको छ । नेपालको नमिचिएको भूमिमा रहेका मानिसहरूको जीविका र आत्मसम्मानको संघर्षलाई नसमेट्ने राष्ट्रवादले हाम्रो समाजलाई अगाडि बढ्न सघाउँदैन । कोही रोगका कारण पीडामा छ, उपचार नपाएर छटपटाइरहेको छ भने समाजका रूपमा हामीले उसको उपचारको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ, उसलाई कुनै खालको नारा सुनाएर हुँदैन ।
भोक, अशिक्षा, बेरोजगारी र गरिबीमा पिल्सिएको मानिसलाई खाना, शिक्षा र रोजगारी सुनिश्चित गर्न हामी सक्षम हुनुपर्छ । यो काममा अहिलेको सरकार कति निकम्मा र संवेदनहीन छ भन्ने त कोरोना महामारीका दौरान हामीले देखेकै छौं । अहिले सरकार कोरोनाका नाममा नागरिकमा सन्त्रास फैलाउनमा लिप्त छ, जबकि यसबीच अरू रोगको उपचार नपाएर धेरै मानिस मरिरहेका छन् । नागरिकलाई भोकैप्यासै छाडेर सरकारले राष्ट्रवादको नारा मात्रै लगाइरहनु शोभनीय हुँदैन ।
यदि हामीले देशलाई सबल र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वाभिमानपूर्वक खडा हुन सक्षम बनाउने हो भने सुरुमा त हाम्रो राज्य सुध्रिनु र सम्हालिनुपर्छ । सत्तामा पुग्नेहरूले शक्तिलाई राज्यस्रोत दोहन गर्दै आत्मसमृद्धिको माध्यम बनाउन बन्द गर्नुपर्छ । कुनै पनि भ्रष्ट व्यक्तिले राष्ट्रवादको नारा लगाउँछ भने बुझे हुन्छ, ऊ राष्ट्रवादलाई आफ्नो अपराध लुकाउने खोलका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दै छ ।
राज्यका सबै सार्वजनिक पदमा हुनेहरूले भ्रष्टाचार नगरी खटेर आम नागरिकको सेवा गर्ने हो भने राष्ट्रलाई बलियो बनाउन तिनले गर्न सक्ने त्यसभन्दा ठूलो काम अर्को छैन ।
नागरिकका हैसियतले आम मानिसको हितका पक्षमा जतिसक्दो काम गर्ने हाम्रो प्रयास रहँदै आएको छ । स्वास्थ्यसेवा र मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि डडेल्धुरामा सोह्रौं सत्याग्रहमा रहेका बेला भारतले उल्लिखित नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै हामीले सत्याग्रह स्थगित गरेका थियौं । त्यस क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई लेखेको पत्रमा हामीले भनेका थियौं, ‘देश ठूलो होस् वा सानो, बलियो होस् वा कमजोर, धनी होस् या गरिब, त्यहाँका नागरिकको मर्यादा र आत्मसम्मान ठूलो र सानो हुँदैन । अन्य देशले भारतको सीमा मिच्दा भारतीय नागरिकलाई जस्तो पीडा हुन्छ, कुनै पनि देशले नेपालको सीमा मिच्दा नेपालीलाई पनि त्यस्तै पीडा हुन्छ । नेपालमा भारतका अनेक सरोकार होलान् । खास गरी राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलताका कारण नेपालमा भारतको गहिरो चासो छ भनिन्छ ।
तर नेपाल मजबुत र समृद्ध भए मात्रै भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित हुन सक्छ । अन्तमा, भारत र नेपाल मिलेर लड्नुपर्ने लडाइँ धेरै छन् । विश्वका धेरै ठाउँमा उन्मूलनजस्तै भएका धेरै संक्रामक रोगको ठूलो भार हामीकहाँ छ । अशिक्षित र निरक्षर मानिसहरूको ठूलो संख्या पनि यसै क्षेत्रमा छ । अपेक्षित गतिमा अर्थतन्त्र विस्तार नहुँदा जीविकाको समस्या त झन् सबैभन्दा जटिल बन्दो छ । आज हजारौं माइल टाढा मरुभूमिमा जोखिमपूर्ण काममा न्यूनतम ज्याला लिएर काम गरिरहेका कामदारमध्ये धेरै भारतीय र नेपाली छन् । त्यसैले यस्ता साझा समस्यासित भारत र नेपाल मात्रै नभई सबै दक्षिण एसियाली देशहरू मिलेर लड्नु जरुरी छ । एकअर्काको सीमा मिच्ने, विद्वेष फैलाउने र अपमान गर्नेजस्ता कामले न आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य हुन सक्छ, न एकअर्काको राष्ट्रिय सुरक्षा नै सुनिश्चित हुन्छ ।’
जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले हामी आज पनि नेपालीहरूको निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लडिरहेका त छौं नै, देशको मर्यादा र स्वाभिमान पनि हाम्रा लागि उत्तिकै प्राथमिकताको विषय हो । नेपाल, भारत वा अन्य कुनै मुलुकमा नागरिकलाई आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गरेर सुगाले झैं नारा मात्रै रट्ने मौसमी राष्ट्रवादमा हामीलाई विश्वास छैन । हामी सधैं नागरिकलाई सबल र स्वाभिमानी बनाउन तथा समाजलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने असली राष्ट्रवादका पक्षमा छौं । तर देशलाई वास्तवमै बलियो र स्वाभिमानी बनाउन राज्य पक्षको जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी वहनमा पूरै असफल भइसकेको अहिलेको सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकका रूपमा जस्तोसुकै भूमिका खेल्न पनि हामी तयार छौं । प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०८:११
आज बर्लिन डर्बी
बर्लिन — कोरोनाको महामारीबीच शुक्रबारदेखि जर्मन बुन्डेसलिगामा अर्को चरणको खेल सुरु हुनेछ । आज एक मात्र खेल रहेको र त्यो हर्था बर्लिनविरुद्ध युनियन बर्लिनको प्रसिद्ध बर्लिन डर्बी हुनेछ ।
यो हर्थाका लागि पुरानो हारको बदला लिने अवसर पनि हुनेछ । युनियनले यसअघि भएको लिगको पहिलो खेलमा हर्थामाथि १–० को जित निकालेको थियो । जर्मनीको माथिल्लो डिभिजनमा राजधानीका दुई क्लब भिडेको यो नै पहिलो अवसर थियो ।
खेल बन्द रंगशालामा हुनेछ । दर्शकको पहुँच हुन्थ्यो त यस खेलमा कम्तीमा ७४ हजार समर्थक रंगशाला आउने थिए । युरोपका प्रमुख फुटबल देशमध्ये जर्मनी फुटबलमा फर्कने पहिलो रहेको छ ।
लिगमा शनिबार हुने प्रमुख खेलमा शीर्ष स्थानमा रहेको बायर्न म्युनिखले एनट्राच्ट फ्रायन्फर्टको सामना गर्नेछ । बायर्नको ५८ अंक छ । यस्तै ५४ अंकमा दोस्रो स्थानको बार्सिया डर्टमन्डले उल्भ्सबर्गको भ्रमण गर्नेछ ।
तेस्रो स्थानको बोर्सिया मोन्चेनग्ल्याडब्याकले बायर लेभरकुजनविरुद्ध घरेलु मैदानमा उत्रने छ । चौथो स्थानमा झरेको लेपजिपको प्रतिद्वन्द्वी भने मेन्ज रहेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०८:११